Ajụjụ - Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd.
Ejiri igwe na igwe akara
Tubelọ tube abụọ
Ekpuchi mmiri tube
Ejiri karama na mkpuchi igwe
You na erekwa ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị nrụpụta?
Anyị bụ ndị factory, niile igwe na-mere site onwe anyị na anyị nwere ike inye hazie ọrụ dị ka gị chọrọ.
Ebee ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị dị? Kedu ka m ga-esi gaa ebe ahụ?
Factorylọ ọrụ anyị dị na Shenzhen, China. Inwere ike iji ụgbọelu leta anyị. Ọ bụ naanị 25 nkeji si anyị factory ka Shenzhen International Airport. Anyị nwere ike ịhazi ụgbọ ala iji kpọrọ gị ebe ahụ.
Ogologo oge ole ka oge nnyefe gị?
Ohaneze ọ bụ ụbọchị 3-5 ma ọ bụrụ na ngwongwo dị na ngwaahịa. ma ọ bụ na ọ bụ 15-45 ụbọchị ma ọ bụrụ na ngwongwo na-adịghị na ngwaahịa, dabere na ma nke ukwu na gị chọrọ. Anyị ga-eweta ya n'oge dịka ụbọchị anyị kwekọrịtara n'akụkụ abụọ.
Kedụ ka m ga - esi wụnye igwe m mgbe ọ bịara?
Anyị ga-enye vidiyo na nkuzi, ma ọ bụ anyị nwekwara ike ịhazi oku vidiyo ASAS igwe akụrụngwa dị njikere na saịtị gị iji kụziere gị otu esi agba igwe. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike iziga injinia anyị n'akụkụ gị iji nyere gị aka ịnwale ma zụọ ndị ọkachamara gị.
Gịnị ma ọ bụrụ na akụrụngwa ahụ adaghị n'oge eji ya?
A ga-eji nlezianya nyochaa ngwaahịa anyị ma kwenye tupu nnyefe ya, anyị ga-enye ntuziaka na vidiyo ziri ezi maka iji ngwaahịa ahụ; na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na-akwado ọrụ akwụkwọ ikike ndụ niile, ọ bụrụ na enwere ajụjụ ọ bụla n'oge ojiji nke ngwaahịa a, biko jụọ ndị ọrụ anyị.
Gịnị bụ nkwa ma ọ bụrụ na anyị azụtara gị?
Igwe niile enyere n'aka anyị ga-enye nkwenye otu afọ site na ụbọchị nnyefe. Ọ bụrụ na enwere akụkụ ọ bụla kachasị agbaji n'ime akwụkwọ ikike ma ọ bụghị site na arụmọrụ na-ekwesịghị ekwesị, anyị ga-enyefe akụkụ ọhụrụ ahụ n'efu.
Kedu ugwo ị na-anabata?
Anyị na-ejikarị T / T ma ọ bụ L / C na anya, anyị nwere ike ịkwado usoro ịkwụ ụgwọ.
Ọrụ mbu ahia:
1. Inye nkwado ndị ọkachamara.
2. Ziga katalọgụ ngwaahịa na vidiyo arụmọrụ.
3. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla PLS kpọtụrụ anyị na ntanetị ma ọ bụ zitere anyị email, anyị na-ekwe nkwa na anyị ga-enye gị azịza na oge mbụ!
4. Nlekọta onwe onye ma ọ bụ nleta ụlọ ọrụ na-anabata nnabata.
Sale nke ọrụ:
1. Anyị na-ekwe nkwa eziokwu na izi ezi, ọ bụ ihe obi uto anyị ijere gị ozi dịka onye na-ahụ maka ịzụ ihe.
2. Anyị na-ekwe nkwa ịbịa n'oge, ogo na oke iji mejuputa usoro nkwekọrịta.
3. Anyị na-elekwasị anya n'inye gị otu ụzọ maka ihe ị chọrọ
1. Ebe ịzụta anyị ngwaahịa 1 afọ akwụkwọ ikike na ndụ ogologo mmezi.
2. Ọrụ ekwentị 24 awa.
3. Nnukwu ngwaahịa nke akụrụngwa na akụkụ, akụkụ dị mfe.
4. Injinia nwere ike ije ozi site n'ụlọ ruo n'ụlọ.